Oge izipu email nwere ike inwe mmetụta dị ịrịba ama na ọnụ ọgụgụ emeghe na ịpị site na mkpọsa ozi ịntanetị nke azụmahịa gị na-ezigara ndị debanyere aha. Ọ bụrụ na ị na-ezipụ ọtụtụ nde ozi ịntanetị, zipụ oge njikarịcha nwere ike ịgbanwe njikọ aka site na ọnụọgụ pasent… nke nwere ike ịsụgharị ọtụtụ narị puku dollar. Ihe ntanetị ndị na-eweta ọrụ email na-akawanye njọ na ike ha inyocha na ebuli oge izipu ozi-e. Usoro nke oge a
Dị ga-akwatu ntanetị na ntanetị na ntanetị iji nweta atụmanya ndị ahịa. Ka ilu ochie na-aga, ebili mmiri na-ebuli ụgbọ mmiri niile. Otu ụkpụrụ ahụ metụtara ahịa ndị ahịa dị irè. Mgbasa ozi mgbasa ozi dị ike nwere ike ịbawanye mmetụta nke ọrụ ahịa ndị ọzọ, site na ịbawanye weebụsaịtị gị na ịchọ okporo ụzọ iji bulie mmekọrịta gị na mmekọrịta mmekọrịta na mmekọrịta ọha na eze. Ndị ahịa Savvy achọpụtala nke a ruo ọtụtụ afọ ma wepụta atụmatụ dị iche iche iji nweta uru